DEG DEG: Wafdi kasocda 2-da Aqal ee baarlamaanka Federaalka oo kuwajahan Kismaayo.
KISMAAYO(P-TIMES) – Mudanayaal katirsan baarlamaanka Faderaalka ee Soomaaliya labadiisa golle ayaa maanta ku sii jeeda magaalada Kismaayo ee xarunta KMG ah Jubbaland, si ay goobjoog uga noqdaan doorashada Madaxwene-nimada maamulkaas oo dhici doonta 24-ka bishan.
Mudanayaasha oo u badan mucaaradka dawladda ee kujira baarlamaanka ayaa dhinaca kale doonaya in ay isku soo jiidaan cid kasta oo kusugan Jubbaland, kuwaas oo ay u arkaan in ay dan u tahay geedi socodka doorashooyinka.
Madaxweynaha Jubbaland ayaa xalay sheegay in ay dadaal kasta ku bixin doonaan sidii meelmar looga dhigi lahaa doorasho ku dhacda sida ugu wanaagsan ugu haboon, isagoo sheegay in dadka oo dhan looga baahan yahay ka shaqeynta ammaanka.
Xisbiyada mucaaradka dawladda Faderaalka ee fadhigoodu yahay Muqdisho ayaa gabi ahaanba soo dhaweeyey soo bixida baarlamaankii Jubbaland, waxayna sheegeen in geedi socodka doorashooyinka Jubbaland uu hadda kusocdo si ka madax banaan faragalin dawladda dhexe uga timaada.
Jubbaland ayaa iska diiday dalab kasta oo uga yimi dawladda Faderaalka oo ku wajahnaa in ay saameyn ku yeelato hanaanka doorashooyinka, waxayna cadeysay in aysan marnaba diyaar u aheyn in arrimaheeda gudaha lafaragaliyo.
Madaxtooyada Soomaaliya waxay dadaal badan galisay sidii meelmar uga dhigi lahayd in musharax ay wadato uu saameyn ku yeesho doorashada, balse arrimahaas oo dhan Axmed Madoobe ayaa ka hortagay, markii uu magacaabay guddiga doorashooyinka oo markii hore ay aqbaleen musharaxiintu balse ay gadaal ka diideen.